दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार ८ आइतबार - Sutra TV Sutra TV
दैनिकी राशिफल : वि.सं. २०७६ असार ८ आइतबार
मेष : तपाईंको प्यारो सपना साकार हुनेछ। तर आफ्नो उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् किनकि धेरै आनन्दले केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। साना बच्चाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछन् र आनन्दित गराउनेछन्। यो दिन तपाईंको प्रेम जीवनको मामलामा शानदार छ। प्रेम गरि राख्नुहोस्। तपाईंको सञ्चार प्रविधी र काम कौशल प्रभावशाली हुनेछ। तपाईंलाई आज आफ्नो जीवन साथी गुँड भन्दा मीठो छ भन्ने महसुस हुनेछ।
वृष : स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। आँखाले कहिल्यै झूठ बोल्दैन र आफ्नो साथीको आँखाले तपाईंलाई साँच्चै आज केहि विशेष भन्नेछन्। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
मिथुन : तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। कुनै ऐतिहासिक स्मारकमा छोटो वनभोजको योजना मिलाउनुहोस्। यसले छोराछोरीहरूलाई र अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई जीवनको नियमित व्यस्तताबाट केही समयको लागि धेरै नै खाँचो परेको विश्रान्ति प्रदान गर्ने थियो। रोमान्सको रोमाञ्चक दिन – साँझको लागि केहि विशेष योजना बनाउनुहोस् र त्यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
कर्कट : पिउँदा र खाँदा होसियार हुनुहोस्। बेवास्ताले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। तपाईंले बचत हुने लगानीमा लगानी गर्नुभयो भने राम्रो पैसा कमाउनु हुनेछ। भावनात्मक जोखिम तपाईंको पक्षमा हुनेछ। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कठिन चरण पछि यस दिन निवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
सिंह : तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको आशा पूरा गर्न सक्ने छैनन्। तिनीहरूलाई तपाईंको ढड्डी र लहडी पारामा काम गराउने आशा नगर्नुहोस्, बरु शैली परिवर्तन गराउने प्रयास गर्नुहोस् । तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने – तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। विवाह यौनको लागि मात्रै हो भनेर भन्नेहरूले ढाँट्छन्। किनभने, आज तपाईंलाई साँचो प्रेम के हो भन्ने थाहा हुनेछ।
कन्या : रक्तचापका विरामीहरुले आफ्नो रक्तचाप कम गर्न र कोलेस्ट्रल नियन्त्रणमा राख्न रेड वाइनको मद्दत लिन सक्नुहुनेछ। यसले तिनीहरूलाई धेरै आराम दिनेछ। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि तपाईंको भाइ तपाईंले सोचे भन्दा अझ बढी सहयोगी हुनेछ। तपाईंका मुस्कानको कुनै अर्थ छैन – तपाईंका हास्यको कुनै आवाज छैन – तपाईंलाई सामिप्य नहुनाले मुटुले धडकन बिर्सन्छ – तपाईंको अरूलाई बुझाउन सक्ने क्षमताले राम्रो लाभांश प्राप्त हुनेछ। एउटा व्यक्तिले आज तपाईंको जोडीको धेरै चासो लिन सक्छ, तर केही नराम्रो भएको छैन भन्ने तपाईंलाई दिनको अन्तमा महसुस हुनेछ।
तुला : तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् – र आज आवश्यक वस्तुहरू मात्र किन्नुहोस्। तपाईंले छोराछोरी वा तपाईं भन्दा कम अनुभवीहरूसँग धैर्य धारण गर्नुपर्छ। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो जीवनसाथीको न्यानो माया महसुस गर्नु हुनेछ।
वृश्चिक : मुस्कान अविरल रूपमा तपाईंको अनुहारमा हुने र अपरिचित पनि परिचित जस्तो लाग्ने दिन। बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। तपाईंको अत्यधिक ऊर्जा र अथाह उत्साहले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ र घरेलू तनाउ सुधार्नेछ। आज एकोहोरो माया विनाशकारी साबित हुनेछ। तपाईं साँच्चै नै आज लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने – अरूले दिएको सल्लाह सुन्नुहोस्। दैनिक आवश्यकताहरू पूरा नगर्नाले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज तनाउ हुनेछ। यो भोजन, सरसफाइ, अन्य घरेलू काम आदि जस्तै कुराहरूको बारेमा हुन सक्छ।
धनु : बच्चाहरुसँग खेल्नाले तपाईंलाई धेरै शान्तिको अनुभव हुनेछ। कुनै पनि लामो अवधिको निवेश नगर्नुहोस् र आफ्ना असल मित्रसँग बाहिर गएर केही सुखद समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। तपाईंको साहसले प्रेमलाई जीत्नेछ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
मकर : बढी क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाममा लीन हुनुहोस्। तपाईंले बचत निवेशमा आफ्नो बचत राख्नुभयो भने तपाईंलाई राम्र फाइदा हुनेछ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। कसै कसैको लागि सुन्दर उपहार र फूलले भरिएको रोमान्टिक साँझ। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : केही मनोरञ्जनको लागि आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किने प्रयास गर्नुहोस्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। एक-अर्काको मत बुधेर व्यक्तिगत समस्याको समाधान गर्नुहोस्। यिनीहरूलाई सार्वजनिक नगर्नुहोस् अन्यथा तपाईंलाई बदनामी गर्ने सम्भावना धेरै छ। यो तपाईंको प्रेमी जीवनमा एउटा अचम्मको दिन हुने छ। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
मीन : तपाईंको मनमा अनावश्यक विचार आउन नदिनुहोस्। तपाईंको मानसिक दृढता बढाउन शान्त र तनाउ मुक्त बस्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। परिवारको गोप्य समाचारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन् – पुर्याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। तपाईं आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सामानको अतिरिक्त हेरचाह गर्न आवश्यक छ। पारिवारिक द्वन्द्वले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा असर पार्न सक्छ।